XUZHOU MINYAN IMPORT & EXPORT CO., LTD. oo ku yaal magaalada ugu caansan mashiinnada dhismaha ee Xuzhou, Shiinaha. Maaddaama ay tahay mashiin dhisme xirfadle ah iyo qeybaha dayactirka dhoofinta, Minyan waxay leedahay waayo-aragnimo suuq-geyn sannado badan ah oo loogu talagalay mashiinnada dhismaha ee Shiinaha, waxaan leenahay waayo-aragnimo badan iyo reso ...Akhri wax dheeraad ah »
Qod-jeexayaashu waxay ka shaqeeyaan munaasabado kala duwan waxayna dooran doonaan agabyada kala duwan ee qalabka, qalabka caadiga ah sida baaldiyo, jabiyayaasha, rippers, hagaha haydhka iyo wixii la mid ah. Kaliya xulashada qalabka saxda ah, waxaan ku heli karnaa xawaare sare iyo karti shaqo oo wax ku ool ah va ...Akhri wax dheeraad ah »
Baaldi waxaa loola jeedaa xubin u eg baaldi oo loo isticmaalo in lagu qodo alaabta dabacsan sida carrada, ciidda jaalaha ah, dhagxaanta iyo qashinka dhismaha. Waxay ka kooban tahay saxanka hoose, saxanka derbiga, saxanka dhegta, saxanka dhegta, saxanka ilkaha, saxanka dhinaca, iyo ilkaha baaldiga. Waa nooc ka mid ah qalabka shaqada ...Akhri wax dheeraad ah »